Vanorarama nekuita zvepabonde vanoti ikuvharwa kwenyika kuri kuvasiya vari parumana nzombe sezvo vasiri kuwana vanhu vanoita kuti bhizimusi ravo risimukire zvichienzaniswa nenguya yapfuura pasi pasati parohwa neCovid-19.
Muzvare Princess Goredema, avo vanoti vanobva kwaZvimba asi vachigara muguta reFrancistown muBotswana, vaudza Studio7 kuti kurambidzwa kufamba famba kwevanhu kuri kuita kuti vakohwe padiki diki kana kusakohwa zvachose.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Muzvare Melody Porongai, vanoti mapurisa nemasoja anorara achienda husiku hwese mumisha inogara veruzhinji kozezesa vatengi nevatengesisenzira yekutyityidzira vanorarama nekuita zvepabonde kuti vasabude mudzimba manheru.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutengesa muviri mudhorobha reFrancistown muBotswana, icho chada kudomwa nezita rekuti Muzvare Millicent, chinoti kuvharwa kwenyika kuri kuvaisa panguva yakaomarara
Mashoko aMuzvare Millicent atsinhirwa nevanoona nekufambiswa kwemashoko musangano rinorwira kodzero dzevanorarama nekutengesa bonde muBotswana, reSisonke Botswana, VaMandla Pule, vachiti basa rekutengeswa kwebonde rinowanda kana zuva ravira.
VaPule vanoti vari mubishi rekunganidza chikafu nezvimwewo zvinodiwa mukurarama kwemunhu kuitira kuti vakwanise kubatsira vanorarama nekuita zvepabonde.
Asi Muzvare Millicent vanoti vachatenda maruva vadya chakata nokuti sangano iri rinogara richivavimbisa kuvabatsira nechikafu nezvimwewo zvinodiwa muhupenyu hwemunhu asi rinozoita kwakaenda tsvimbo ndiko kwakaenda dohwe.
Nyanzwi munyaya dzehupfumi uye vari mudzidzisi wezvemari paUniversity of Botswana, VaKenneth Muponda, vanoti kuenda kumawere kwemamiriro ezvehupfumi munyika zhinji pasi rose nokuda kweCovid-19 kungangosvitsa basa iri rinoziikwanwa seoldest profession pachirungu kumagumo.
Zviri kuitika muBotswana kumadzimai anorarama nekuita zvepabonde, zviri kuitikawo munyika dzakawanda.
Vanorarama nekutengesa miviri yavo vakaratidzira muguta reLilongwe muMalawi mwedzi wapera pamahofisi ekanzuru yedhorobha iri vachinyunyuta nekuvharwa kwemabhawa vachitiwo vanoda kuti avhurwe nenguva yembiri masikati kusvika pakati pehusiku.